E-Journal: May 2008
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:28 PM7comments
“သူများအကြောင်းလည်း မပြောတတ်ပါ၊ စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ” တဲ့။ စိုင်းစိုင်းကတော့ သီချင်းလုပ်ဆိုသွားတယ်။ “မင်း - သူများအတင်း အတော်ပြောနိုင်တဲ့ကောင်ပဲ။” အဲဒီလိုများ အပြောခံလိုက်ရပလားဆိုရင် လူအတော်များများက မခံချင်အောင် ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်လေ။ (ပြောရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလိုပါပဲ။) အဲ… ဒါပေမဲ့ သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ့်ကောင်းကြောင်း ပြောနေရရင် စကားဆိုတာတွေကလည်း အတော်ချိုနေသလိုလို။ တစ်ခါတစ်လေများ ညစ်နေတာလေးတွေတောင် ပျောက်ကုန်ပြီး လန်းဆန်းလာတတ်တာ။ လူတစ်ချို့ကတော့ ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကို အတော်ခုံမင်တတ်ကြသလား မသိပါဘူး။ နောက်တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ စပ်စုတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး။ “ဒီကောင် အတော်စပ်စုတတ်တယ်ကွ” အဲဒီလိုများ အပြောခံလိုက်ရပလားဆိုရင်လည်း မျက်နှာကြီးတွေက ဖြစ်သွားတတ်လိုက်ကြတာ။ မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူဆိုတာ မျောက်ကဆင်းသက်လာတယ်တဲ့။ (အတော်များများ လက်ခံထားတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုပေါ့။) မျောက်တွေ အတင်းပြောမပြောတော့ သေချာမသိပါဘူး။ ဒီကောင်တွေ စပ်စုမှာတော့ သေချာတယ်ဗျ။ အငြိမ်မှမနေပဲ။ ဟိုပြေးလိုက်၊ ဒီပြေးလိုက်။ သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်လိုက်နဲ့လေ။
ထားတော့။ ကျွန်တော် စပ်စပ်စုစုလုပ်ထားတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုကို ပြောချင်လို့ အားလုံးပဲ ဒီလို တစ်ခါတလေ စပ်စုမှာပဲလို့၊ စပ်စုဖော် စပ်စုဖက် ညှိနေတာ။ မစပ်စုတတ်ပါဘူး ပြောလာရင်တော့ - “ဟေ့ -- တို့တွေအားလုံးက မျိုးနွယ်တူနော်” လို့ ပြောမယ်လေ။ ကဲမပိုင်လိုက်တဲ့ အကြံလို့ တွေးမိဘူးလား။ အဖြစ်ကဒီလို။ တနေ့လည်ခင်းမှာပေါ့။ ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ် ပျင်းနေကြတာလေ။ ပြောစရာ အတင်းအဖျင်းနဲ့ သတင်းတွေ၊ သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းတွေ ကလည်း ကုန်နေပြီ။ အဲ… အဲဒီလိုနေတုန်းကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ထိုင်နေတဲ့နားမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖုံးလာပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်က ခေါ်လို့ လာပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်နေတာက အလုပ်ထဲက အများသုံး တယ်လီဖုံးနားမှာ။ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ ဖုံးပြောတယ်။ ပြီးတော့ ထွက်သွားတယ်။ ကောင်မလေးပြန်သွားမှ သူငယ်ချင်းက တစ်စခန်းထတာ။ ဟေ့ကောင် ဒီကောင်မလေး ဖုံးပြောတာကို ငါလိုက်ရေးထားတယ်တဲ့။ ဟုတ်သလားပေါ့၊ ပေးပါအုံး ဖတ်ကြည့်မယ်။ ဒီလောက်ပဲ။ ဖတ်ကြည့်နေရင်းမှ စိတ်ထဲမှာ ပြုံးချင်တာ။ အော်.. တစ်ခါတစ်လေ ငါတို့ ဖုံးပြောလည်း ဒီလိုပဲထင်ပဆိုပြီးလေ။ စိတ်ထဲကနေ မဖတ်ဘဲ၊ အသံထွက်ဖတ်ကြည့်။ ပြီးတော့ သူတို့ဘာတွေပြောလည်း စဉ်းစားကြည့်။ ပြုံးချင်စရာဗျ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 4:09 AM6comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုခမိန်, အရောင်စုံ အတွေးများ . . . . ., ပျော်စရာလေးတွေ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 1:39 AM 10 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:16 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:00 PM5comments
ဦးဦး စစ်ဘိုကြီး ဘဘ ဘိုချုပ်ကြီးများခင်မျာ သား က ပြင်စလူရွာက ၄ တန်းကျောင်းသားလေး အေးကိုပါ။ သားတို့အမေအပျိုပေါက်တုံးကတော့ မြ၀တီဆိုတဲ့ စာစောင်ထဲမှာ ပြင်စလူရွာသူဆိုပြီး ဖော်ပြခံရဘူးတဲ့ ပင်လယ်ဝက တံငါရွာလေးကပါ။ ပင်လယ်လေတဖြူးဖြူးနဲ့ ဆားချက်၊ ငါးဖမ်း၊ ပိုက်ထမ်းလာတဲ့လူ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ ပျော်စရာရွာလေးပါ။
ခုဆို ရွာကို ဘယ်နေရာမှာ ရှာရမယ်တောင် မသိတော့ ပါဘူးဗျာ။
ရွာထဲကလူတွေကလည်း ဘယ်ဆီရောက်လို့ ရောက်တယ်ကို မသိတော့ပါဘူး။ခုဆို သားမှာ ထမင်းမစားရတာလည်း ၄ ရက်ကျော်ဘီ။ ရေကတော့ လယ်ထဲက ရေနောက်တွေပဲ သောက်ရတာပေါ့ ။ယောက်ကျားပဲ သေတစ်နေ့မွေးတစ်နေ့ပေါ့ ဆိုပေမယ့် သားက ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်သေးတယ်။ ခုဆို သားတို့ကျောင်းလေးလည်း ဘယ်ဆီမှာ ရောက်လို့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပလဲ မသိတော့ပါဘူး။ ဆရာလေး ကိုအောင်ထက်ရော ဘယ်မှာများလဲ။ ဆရာမလေး ဒေါ်ကေသီရော ကျန်းမာပါ့မလား။ ဆရာမက မပေါ့မပါးကြီး ဖြစ်နေတာတောင် ဆရာ မလုံလောက်လို့ ကျောင်းကိုလာပြီး သင်ပေးရှာတာလေ။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ဆရာလေးနဲ့ ဆရာမလေးကတော့ ဘေးကင်းမယ်ထင်တာပါပဲဗျာ။ သားတို့လို အစွန်အဖျားကရွာလေးကို လာသင်ပေးမယ့် ဆရာရော ရှိပါဦးမလား ။ သားတို့ရွာက သက်ကယ်မိုး ထရံကာ ကျောင်းလေးကရော ပြန်ဖြစ်လာပါဦးမလား ။ သားရော ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ပါဦးမလား ။ ကျောင်းဆရာမကြီး လုပ်မယ့် ရွှေစင်ကတော့ ၀မ်းပျက်တာနဲ့သေရှာပြီ ။ သင်္ဘောသား လုပ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်မယ့် အောင်ကျော်ကတော့ ပင်လယ်လှိုင်းထဲပါသွားပြီ။ ပင်လယ်လုပ်သားပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မျက်ပြူး၊ သူနာပြူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ မသီတာ၊ ငါကတော့ အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ ၀တုတ်၊ ကျောင်းဆရာမလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ ကြည်ပြာ ၊ သားနဲ့ ကစားဖော် ကြီးကြီး ငယ်ငယ်တွေ သေကုန်ကြပြီဗျ။သားနဲ့ ကြွက်တူးဖော် အိမ်က နီကျား ကတော့ မုန်တိုင်းထဲမှာ ပျောက်သွားပြီ။ အိမ်က ကျွဲတရှဉ်းကလည်း သေလို့ပွတောင်နေရောပေါ့ ။ မြင်နေကြ ရေပြင်ကြီးကိုတောင် ခုဆို သားမုန်းနေပါပြီ။ ဘယ်ကိုသွားလို့ သွားရမယ်ကို သားမသိတော့ပါဘူး ။သားဗိုက်ထဲမှာလည်း တစ်ကျုတ်ကျုတ်မြည်နေပြီ။ မေခလာဆိုတဲ့ နတ်သမီးကလည်း လာခဲလိုက်တာ ဦးတို့ရယ်။ ဦးပေါ်ကြီးကတော့ ကောင်းကင်ကနေ လေယဉ်ကြီးတွေ နဲ့ သားတို့ကိုလာခေါ်မှာဆိုပဲ ။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ လေယဉ်စီးပြီး မြို့ကို သွားဘူးတယ်ရှိတာပေါ့။ ခက်တာက လေယဉ်ကလည်း ကိုထူးတို့အိမ်ကထော်လာဂျီလောက်တောင် မမြန်ပါလားဗျာ။ ကိုထူးတို့ ထော်လာဂျီတောင် မြို့နဲ့ရွာကို တစ်နေ့နှစ်ခေါက်ပြန်နိုင်သေးတယ်။ ခုထိကို မလာနိုင်သေးပါတဲ့ လေယဉ်လည်း ကျန်းမာ ပါစေဗျာ။ လေယဉ်ကသေးသေးလေးဆိုရင်တောင် လောက်ပါတယ်ဦးရယ်။ လူက ခုဆို သားနဲ့မှ ၉ယောက်ပဲရှိတာ။ ကျန်တဲ့ လူတွေကတော့ သေတဲ့လူကသေ၊ ပျောက်တဲ့လူကပျောက်ကုန်ပြီ။ ၉ယောက်ထဲဆို ခရီးမသွားကောင်းဘူးဆိုတော့. . . အင်းဗျ . . . မောင်ကျောက်ခဲလေးကို ခေါ်သွားဦးမှ ။ သားတို့တိုင်းပြည်မှာက စစ်တပ်မှာပဲ ရဟတ်ယဉ်ဆိုလား ပုဇင်းလိုကောင်ကြီး ရှိတယ်လို့ ဆရာလေးက ပြောဘူးလို့ ဦးတို့ကို တရတာပါဗျာ။ မင်းသားတွေ မင်းသမီးတွေ စီးတဲ့ လေယဉ်ကတော့ ဒီလိုဗွက်ထဲကို မဆင်းနိုင် မတက်နိုင်ဘူးလို့ ဦးပေါ်ကြီးကပြောတယ်ဗျ။ သားတို့ရွာ က ဘိုသင်တန်းတက်တဲ့ ကိုသန်းစိုးရော လာကယ်ပါ့မလားပဲ။ သူတို့ ကုန်စုံဆိုင်ကတော့ ကုန်ပြီဗျ။ ဆိုင်ဘေးက မန်ကျည်းပင်ပိတာနဲ့ ပြားသွားရှာတာပဲဗျာ။ သူတို့တင် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အားလုံး ခံရတာပါပဲ။လာမယ့် မိုးဦးကျ ကြရင် ဘယ်က နွားနဲ့ ကျွဲနဲ့ လယ်ထွန်ကြမယ် မသိပါဘူး။ မျိူးစပါးကရော ဘယ်ကလာပါ့မလဲ။ မျိုး အနေသာသာ ခုဆို သားတို့စားစရာ ဆန်တောင် ရှိတော့တာမှ မဟုတ်ပဲဗျ။ တွေးရင်တော့ သားတော့ ငိုချင်တာပါပဲ။ သားကျောင်းတက်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေကလည်း မရှိတော့ဘူး။ လေထဲပါကုန်ပြီဗျာ။ သား ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ချင်သေးတယ် ဦးတို့ ဘတို့ရယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကယ်ကြပါဦး။ ကူကြပါဦး ။ ပုံမှန်ဆို သားတို့က စားနိုင်သောက်နိုင်ထဲကပါ။ သားရှက်လည်း ရှက်ပါတယ် ရှက်လည်း မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ခုဘယ်က စလို့ စရမှာလည်း ။ အားလုံးကုန်ပြီလေ။ လယ်လုပ်သားကလည်း အစကတည်းကရှားတာ။ ခုဆို သားပါမှ တစ်ရွာလုံး ၉ ယောက်ပဲကျန်တာ။ ဒီပုံအတိုင်းဆို ၃နှစ်လောက် မနေမနား လုပ်တောင် ဒီလယ်တွေ စိုက်လို့ ပီးပ မလား။ နောက်ပြီး ဆားကွင်းတွေ၊ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ၊ လှေတွေကရော ဘယ်ကရမှာလဲ။ လူတွေကရော ဘယ်ကရမလဲ ။ ခုဆို ပိုက်ဆံကလည်း မရှိတော့ဘူး။ လူအငှားရရင်တောင် ဘယ်ကပိုက်ဆံနဲ့ အခ ပေးရမလဲ ။ ဦးတို့ စစ်သားတွေကလည်း လယ်တော့ လုပ်တတ်မယ် မထင်ပါဘူး။လုပ်တတ်တောင် အားမှာမှ မဟုတ်ကြတာနော ။ လူတွေကလည်း အစကတည်းက မြို့တက်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားကြတာပါ ။ ခုဆို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ။ ခက်ပါတယ်ဦးတို့ ဘတို့ရယ်။ ဆေးခန်းလေးကလည်း လေကြောင့်ပြားချပ်လို့။ သားတို့မှာ နေ့ဆို အောက်ကရေပူ အပေါ်ကနေပူ၊ ညကျတော့ လေက တဗြန်းဗြန်းနဲ့ ချမ်းမှ ချမ်းပဲ ။ ဆေးလေး ဘာလေးကလည်း မရှိ၊ ခြင်ကလည်းပေါ ။
ကြာရင် ၉ ယောက်တောင် ကျန်ပါဦးမလား ။ ကယ်ပါဦး ဦးတို့ ဘတို့ရယ် ။ ပုဇင်းလေးနဲ့ လာကယ်လှဲ့ပါ။ဦးပေါ်ကြီးလေဒီယိုလေးက ကြားရတာကတော့ ဦးတို့က မ၀င်ခိုင်းလို့ ပုဇင်းတွေ ၀င်လို့မရတာဆို။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဦးတို့ ဘတို့ရယ်။ သားတို့ကြာရင် သေ တော့မယ်။ ကျောသားရင်သား မခြားပဲ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြတယ်ဆို၊
သားလည်း ဦးတို့ ဘတို့ သားတွေ မြေးတွေလို ကျောင်းတွေအေးအေးလူလူတက်ပြီး ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်။ သား ကို မေ့မထားပါနဲ့ဗျာ ။
(သတင်းတွေထဲက ကလေး အလောင်းတွေကိုမြင်ရပြီး စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ကလေးတစ်ယောက်နေရာက စိတ်ကူးယဉ်ထားမှူ့ပါ ။ အားလုံး တတ်နိုင်သမျှ ကူပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 1:40 AM5comments
ထမင်းအိုးကို ခွဲရက်သူရေ …
မျက်ရည်နဲ့ အလွမ်းဆက်မနေအောင်များ မင်းလုပ်လိုက်လေသလား။
ဟင့်အင်း … ငါဆက်မမေးချင်တော့ဘူး၊
အသိဉာဏ်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစရာမလိုလို့လေ။…..။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:32 PM 1 comments